काठमाडौंः नेपालमा शुक्रबार थप २०५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख नाघेको छ ।
शुक्रबार देशभर २०५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या एक लाख ६७६ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले बताए ।
नेपालमा गत माघ ९ गते पहिलो पटक चीन फर्किएका एक व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसको २६० दिनपछि अर्थात् झन्डै साढे आठ महिनामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या एक लाख नाघेको हो ।
याे पनि पढ्नुस को हुन् सोमबार थपिएका ८० कोरोना संक्रमित ? हालसम्म कुन जिल्लामा कति ?
शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकामा १४०९ जना संक्रमित थपिएका छन् । हाल काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बनेको छ । एक हप्तामै काठमाडौं उपत्यकामा १० हजार बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
नेपालमा आज १,६८० निको भए । हालसम्म निको हुनेको संख्या ७३ हजार २३ पुगेको छ । शुक्रबार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार ५३ छ ।
आज १० जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय पुगेको छ ।
असोज २२ गते बिहीबार देशभर हालसम्मकै बढी ४३६४ र उपत्यकामा २५४० जना संक्रमित थपिएका थिए । गत भदौ २४ देखि प्रत्येक दिन १,००० भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस थप १०८१ जनामा कोरोना पुष्टि, ६ को मृत्यु
आज ५६ जिल्लामा संक्रमित थपिएका छन् ।